Weerarro Argagaxiso oo maanta lala Beesaday Turkiga – Radio Daljir
Agoosto 10, 2015 7:56 b 0
Isniin, Ogoosto 10, 2015 (Daljir) — Ugu yaraan Sideed Ruux oo u badan Askarta Turkiga ayaa ku Geeriyooday Qarax iyo rasaas lagu weeraray saldhig ciidan oo ku yaalla Koonfur-bari dalka Turkiga maanta oo Isniin ah; iyadoo sidoo kale la weeraray Qunsuliyadda dalka Mareykanka ee Magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Weerarradan kala duwan ayaa waxay ahaayeen kuwo ugu xumaa ee maalin qura ka dhaca Turkiga, iyadoo la sheegay in weerarka ka dhacay Qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbuul aysan waxba ku dhiman.
Afar ka tirsan Booliiska Dalka Turkiga ayaa ku Dhintay Qarax ka dhacay Gobolka Sirnak, iyadoo wax-yar kadibna uu nin hubeysan ku furay rasaas diyaarad kuwa Qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Millateriga dalkaas oo lagu dilay hal askari.
Xiisadaha u dhexeeya xukuumadda Turkiga iyo Kooxda Kurdish-ka ah ee PKK ayaa soo xoogeysanayay xilliyadii ugu dambeeyay, iyadoo weerarradan ay ku soo beegmayaan xilli ay Turkigu duqeymo ku billaabeen saldhigyada Kurdish-ka ee ku yaalla dalka Ciraaq.
Sidoo kale, kooxihii weeraray Qunsuliyada Mareykanka ee Istanbuul ayaa lasoo sheegayaa in ay kala Carareen, iyadoo Ruux loo Maleynayo inay Haweeney tahay ay Goor-dambe soo xireen ciidamada amniga Turkiga.
Weerarkii ka dhacay Saldhigga Booliiska ee Sultanbeyli oo ahaa mid loo adeegsaday Gaari Waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay ayaa la Sheegay in 10 Ruux oo ay ku jiraan Saddex Askari oo Booliis ah.
Dhanka kale, wararka ayaa intaas ku daraya in laba ka mid ah kooxihii weerarka ku qaaday Saldhigga Booliiska ayaa la dilay, kaddib iska-horimaad dhex-maray iyaga iyo Booliiska, iyadoo askari dhaawac ahaana uu goor-dambe ku dhintay isbitaalka.
Turkiga ayaa bishii lasoo dhaafay ee July billaabay inay duqeeyaan saldhigyada ay Kooxda Kurdish-ku ku leeyihiin Ciraaq iyo Saldhigyada kooxda ISIS ay ku leedahay dalka Suuriya oo ay daris yihiin Turkiga, Duqeyntaas oo uu Amarkeeda bixiyay Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan.
Hoggaamiyaha Ururka PKK, Cemil Bayik ayaa Xukuumadda Turkiga ku eedeeyay in ay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada Kurdish-ka ay ku difaacayso kooxda ISIL ama Daacish.
“Xukuumadda Turkiga waxay duqeymaha ka dhanka ah PKK ku difaacaysaa ISIL, waayo innagu Waxaan dagaal kula jirnaa Daacish,” ayuu yiri Bayik oo la hadlayay Warbaahinta Isniinta Maanta ah.
Ugu dambeyn, Xoogagga PKK ayaa Horumarro Waaweyn ka gaaray Dagaallada Daacish ay kula jiraan, Laakiinse Turkiga iyo dalal kale oo Reer galbeedka ka mid ah ayaa Kooxda Kurdish-ka ee PKK u aqoonsaday Koox Argagaxiso ah.
Dhagayso Barnaamijkii Caawa Iyo Daljir – Wariye Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin 10_August_2015 Radio Daljir Studio Garowe Isniin.